IPL : दिल्लीको प्ले-अफ यात्रामा हैदरावाद बन्ला बाधा ? यस्तो छ दुवै टिमको सम्भावित ११ – WicketNepal
IPL : दिल्लीको प्ले-अफ यात्रामा हैदरावाद बन्ला बाधा ? यस्तो छ दुवै टिमको सम्भावित ११
WicketNepal Staff, २०७७ कार्तिक ११, मंगलवार ०९:४४
दिल्ली अंकतालिकामा ११ खेलमा १४ अंक सहित दोश्रो स्थानमा रहेको छ भने हैदरावाद समान खेलमा ८ अंक सहित सातौं स्थानमा रहेको छ।
लिगमा उत्कृस्ट सुरुवात गरेता पनि दिल्ली पन्जाब र कोलकातासंग हारपछि चिन्तामा छ। इशान्त शर्मा लिगबाट बाहिरीएको अवस्थामा टिमलाई पाँचौ बलरको अभाव महसुस भएको छ। पेसर तुषार देशपाण्डेले अन्तिम ३ खेलमा १२ रन प्रतिओभर रन खर्चिरहेका छन् जसले मात्र १ विकेट लिन सकेका छन्। टिमले अर्का पेसर हर्षल पटेललाई मौका दिन सक्छ जो ब्याटिंग पनि राम्रो गर्न सक्छन्।
शिखर धवन उत्कृस्ट लयमा रहेता पनि अर्का ओपनर पृथ्वी शको फर्म टिमको टाउको दुखाइको कारण बनेको छ। पृथ्वीलाई गत खेलमा टिममा समाबेश गरिएको थिएन जसको स्थानमा अजिंके रहानेलाई ओपनिंग गराइएको थियो। रहाने इनिंगको पहिलो बलमा आउट हुँदा उनलाई निरन्तरता दिने या पुनः पृथ्वीलाई टिममा ल्याउने दोधार पक्कै टिमसंग छ।
दिल्लीको सकारात्मक पक्ष ११ खेलमा पाएको १४ अंक हो जसले प्लेअफ यात्रा लगभग सुनिस्चित गरिसकेको छ। एउटा जितले दिल्ली प्लेअफ पुग्नेछ भने २ वटा खेलले शिर्ष-२ मा स्थान बनाउनेछ।
तुषार देशपाण्डे महँगो सावित भैरहेका छन् जसकारण दिल्लीलाई पाँचौ बलरको अभाव देखिएको छ
हैदरावादलाई गर या मरको स्थिति
अर्कोतर्फ सनराइजर्स हैदरावादको भने प्लेअफ पुग्न दिल्लीको जस्तो सहज अवस्था छैन। बाँकी ३ वटै खेलमा जितले मात्र हैदरावादको प्लेअफ ढोका खोल्न सक्छ तर त्यसको लागि पनि अन्य टिमको नतिजामा भर पर्नु पर्नेहुन्छ। त्यसमाथि पनि हैदरावादको ३ वटा खेल दिल्ली, मुम्बई र बैंगलोरसंग रहेकोले पनि प्ले-अफ यात्रा आकाशको फल देखिएको छ। तर लगातार ५ जित दर्ता गरेको पन्जाबसंग डेभिड वार्नर कप्तानीको टिमले पक्कै प्रेरणा लिनसक्छ।
अन्तिम खेलमा पन्जाबसंग १२७ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा २८ बलमा २४ रन आवस्यक हुँदा नाटकीय रुपमा ब्याट्सम्यानहरुले विकेट गुमाउन पुगेपछि टिम ११४ मै समेटिन पुगेको थियो।
टिमका स्टार ब्याट्सम्यान केन विलियमसन घाइते भएका कारण खेल्न सकीरहेका छैनन् जो दिल्लीसंग खेल्ने नखेल्ने निश्चित छैन। उनको स्थानमा जेसन होल्डरले निरन्तरता पाउनेछन् जो ब्याटिंग पनि गर्न सक्छन्।
हैदरावादको असफलता ब्याटिंगमा धेरै निर्भर रहेको छ। जोनी बेयरस्टो र डेभिड वार्नरको लागि यो सिजन उत्कृस्ट रहन सकेन। मनिष पाण्डे, विजय शंकरले राम्रो संकेत दिएका छन् तथा होल्डरको आगमनले टिमको उत्साह थपेको छ। तर पन्जाबसंग जस्तो ब्याटिंग कोल्याप्स भने दिल्लीसंग हुनु हुँदैन। दिल्लीको बलिंग लाइन अप उत्कृस्ट रहेको छ जसको अघि हैदरावादको ब्याटिंगको पुनः परिक्षा हुनेछ।
पछिल्लो भेट – हैदरावादले जारि सिजन पछिल्लो खेलमा दिल्लीलाई १५ रनले पराजित गरेको थियो जुन खेलमा वार्नर, बेयरस्टो र विलियमसनले ब्याटिंगमा राम्रो योगदान दिएका थिए। बलिंगमा राशिद खान र भुवनेश्वर कुमार चम्किदा दिल्ली १६३ रनको लक्ष्य पछ्याउन असफल रहेको थियो।
अन्तिम खेलमा दिल्लीलाई हैदरावादले पराजित गरेको थियो
हैदरावादको सम्भावित ११ : डेभिड वार्नर ( कप्तान ) , जोनी बेयरस्टो ( विकेटकिपर ) , मनिष पाण्डे, विजय शंकर, जेसन होल्डर, प्रियम गर्ग, अभिषेक शर्मा/अब्दुल समद, राशिद खान, खलिल एहमद, सन्दिप शर्मा, टि. नटराजन
हैदरावादले तल्लो क्रममा ब्याटिंगलाई थप बलियो बनाउन अब्दुल समदको स्थानमा अभिषेक शर्मालाई मौका दिन सक्छ। विजय शंकरले बलिंग पनि गर्न सक्ने हुँदा हैदरावादले त्यस्तो गर्न सक्छ।
दिल्लीको सम्भावित ११ : शिखर धवन, अजिंके रहाने/पृथ्वी श, श्रेयस ऐयर ( कप्तान ) , रिशभ पन्त ( विकेटकिपर ) , शिमरन हेटमायर, मार्कस स्टोइनिस, अक्षर पटेल, रभीचन्द्रन आश्विन, कागीसो रबाडा, एनरिक नोर्किया, तुषार देशपाण्डे/हर्षल पटेल
दिल्लीको प्ले-अफमा स्थान पक्का नभएको हुँदा आफ्नो सबैभन्दा बलियो टिम उतार्नेछ। तुषार देशपाण्डेलाई बाहिर राख्ने छ या छैन हेर्न लायक हुनेछ। तुषार नखेलेको खण्डमा हर्षल पटेलले मौका पाउन सक्नेछन् जो ब्याटिंग पनि गर्न सक्छन्। यस्तै पछिल्लो खेलमा पृथ्वी शको सट्टा मौका पाएका अजिंके रहानेले निरन्तरता पाउनेछ या शले पुनः मौका पाउनेछन् पनि हेर्न खेल कुर्नैपर्छ। नेपाली लेग स्पिनर सन्दिपले मौका पाउने सम्भावना अझै देखिदैन।